प्रेमीले धोका दिएपछि प्रेमिकाले यसरी बदला लिइन् जस्ले बनायो संसारलाइ चकित ! - Aajako Nepali Khabar
निचोरेर फालेका कागतीकाे खोस्टाका यस्ता अनौठा फाईदा, जान्नुहोस्
तातोपानी आइपुग्यो चीनबाट व्यापारीले ल्याएको १८ हजार अक्सिजन सिलिण्डर
राष्ट्रियसभा सदस्य उपनिर्वाचन लुम्बिनी प्रदेशमा दुईजनाको उम्मेदवारी
महमा अमला डुबाएर दैनिक खाँदा हुन्छ विश्वासै नलाग्ने यस्तो चमत्कार !
चीनले पठाएको यान मङ्गल ग्रहमा अवतरण
प्रेमीले धोका दिएपछि प्रेमिकाले यसरी बदला लिइन् जस्ले बनायो संसारलाइ चकित !
admin - January 3, 2021 January 3, 2021
अक्सर धेरैको जीवन प्रेम र ब्रेकअपको गोलचक्करमा घुमिरहेको हुन्छ । यो नव-यौवना जोडीको मात्र कुरा होइन, पति-पत्नीबीच पनि यस्तो हुन्छ । विवाहित वा एकसाथ बसेको छ भन्दैमा उनीहरुबीच प्रेम सम्बन्ध सुमधुर हुन्छ भन्ने छैन ।
एकसाथ बसेपनि दम्पतीबीच मनमुटाव, झैझगडा, आपसी असमझदारी भइरहेको हुन्छ । प्रेमी-प्रेमिकाको त कुरै छाडौं । धेरैजसाको सम्बन्ध दिगो हुँदैन । प्रेम गर्ने, ठाकठुक पर्ने, ब्रेकअप हुने क्रम उनीहरुमा चलिरहन्छ ।
प्रेम सम्बन्ध किन सधै सुमधुर हुँदैन ? किन ब्रेकअप हुन्छ ? किन एकअर्काले धोका दिन्छ ? यसमा अनेक कारण हुनसक्छ । भनिन्छ, प्रेम विश्वासमा टिकेको हुन्छ । त्यसैले प्रेम सम्बन्धलाई जोड्ने सबैभन्दा मूख्य तत्व हो, विश्वास । त्यससँगै समझदारी आवश्यक हुन्छ । एकअर्कालाई गर्नै केयरिङ त छँदैछ । यद्यपी विविध कारणले दम्पती वा प्रेम जोडीबीचको समबन्धमा दुई चिरा पर्छ । उनीहरुले एक अर्कालाई धोका दिन थाल्छ । किन ?
साँचो माया भाग्यमानीलाई मात्र मिल्छ रे । तर, कसैले आफुलाई धोका दिएको थाहा पाउँदा पृथ्वी खसेको जस्तो महसुस हुने गर्दछ । कोही मानिस मायामा धोका हुँदा ऊसँग टाढा भएर जीवन अगाडी बढाउँछन् भने कोही उल्टै बदला लिने गर्छन् । यस्तै रोचक एउटा घटना अस्ट्रेलियामा भएको छ ।
हिदी रुहोनेन २६ वर्षकी भइन् । उनलाई उनका प्रेमीले धोका दिएको र उनले लिएको बदलाको कारण निकै चर्चा भएको छ । धोकेवाज प्रेमीको लागी सबक सिकाउनको लागी यी महिलाले फरक तरिका अपनाएकी छिन् । मेलबर्न विश्वविद्यालयकी यी छात्राले आफ्ना प्रेमीले झुटो माया गरेको थाहा पाएपछि उनको दिल टुटेको थियो । यसपछि उनले उनका प्रेमीलाई सबक सिकाउनु पर्ने महसुस गरिन् ।
प्रेमीसंग जोडिएका याद आउने सम्पूर्ण सामानहरु बेचिदिएकी छिन् । उनले प्रेमीले दिएका कपडा, जुत्ता, भिडियो गेम, फिल्म, किताब र स्पीकर जस्ता सबै सामान आफ्नै गाडी पार्किङमा सेलमा राखेकी थिइन् । यो सामान बेचेर आएको पैसाले लामो यात्रा गर्ने बताएकी छिन् ।
आफ्नो प्रेमी/प्रेमिका वा श्रीमान/श्रीमती हुँदाहुँदै तेस्रो व्यक्तितर्फ आकषिर्त हुनु धोकाको पहिलो कारण हो । मानिसलाई आफ्नो घरभन्दा बाहिर सम्वन्ध बढाउँदा रोमाञ्च र आनन्द मिल्छ । तर उनीहरु भुल्न पुग्छन् कि यस्तो सम्वन्ध अन्ततः घातक हुनेछ । मानिसहरु आफ्नो जीवनमा केही नयाँपन ल्याउने लालसामा घरबाहिर सम्वन्ध गाँस्न पुग्छन् ।
शारीरिक सम्वन्ध पनि प्रेममा धोकाको एउटा ठूलो कारण हो । नयाँ व्यक्तिसँग सहवासको चाहले पनि अक्सर पुरुष वा महिलाहरुलाई आफ्नो पार्टनरसँग धोकाका लागि उक्साउँछ । यस्ता व्यक्तिहरुमा असन्तोषको भावना हुन्छ जसले गर्दा उनीहरु घरभन्दा बाहिर सम्वन्ध गाँस्न पुग्छन् ।
कैयन मानिसहरुले धोका दिने एउटा अर्को कारण हो आफ्नो घरभित्र खुशी प्राप्त नहुनु । एक अनलाइन सर्भेक्षणमा ५५ प्रतिशत मानिसहरुले आफूहरु घरभित्रको सम्वन्धबाट खुशी नभएर बाहिर सम्वन्ध गाँस्न पुगेको बताएका छन् । यस्तो बताउनेमा ३५ प्रतिशत महिलाहरु पनि थिए ।
तपाईलाई थाहा छ, विमानको भर्याङको मुनी किन बनेको हुन्छ सानो प्वाल ? : विमानसँग जोडिएका केही नसुनेका तथ्य